Jefferson Pérez - Ragga Qaabka Leh iyo Ka Gudubka | Ragga Stylish
Alicia tomero | | nololeedka, Waqtiyada firaaqada
Jefferson Pérez waa tusaale qof weyn iyo horumar. Sharaf baad kugu leedihiin inuu noqdo mid ka mid ah marayaasha waaweyn oo tixgelin leh mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican edebtiisa. Isaga gadaashiisa wuxuu ku leeyahay xirfad muhiim ah Olombikada abaalmarino aan rag badani ku dhex marin waqtigiisa.
Wuxuu u huraa qayb ka mid ah noloshiisa ciyaaraha iyo waxay ku urursataa 11 billadood dhacdooyin badan oo caalami ah. Jefferson Pérez wuxuu la wadaagayaa Robert Korzeniowzki sharafta ah noqoshada kuwa ugu fiican adduunka. Jefferson wuxuu ka fariistay howlihiisii ​​isboorti ee aadka u tartamayay bishii Sebtember 2008, ka dib finalkii Tartankii Adduunka ee lagu qabtay Murcia. Markii dambe wuxuu naftiisa u huray inuu sii wado inuu sii wato horumarka waxbarashadiisa.
1 Bilowga isboortiga ee Jefferson Pérez
2 Jidkaaga shaqo ee ugu horreeya
3 Biladihiisii ​​ugu horreeyay ee Olimbikada
4 Abaalmarinada kale ee muhiimka ah
5 Raacitaankiisu ma sahlaneyn
6 Sidee ka noqoshadaadu ahayd?
Bilowga isboortiga ee Jefferson Pérez
Jefferson waa reer Ecuador wuxuuna ku abtirsadaa Manuel Jesús Pérez iyo María Lucrecia Quezada. Waa laba waalid oo lagu majeerto is-hoosaysiinta iyo shaqadooda asalka ah ee wax ogaa sii amnigaas gaarka ah ee saadka canuggaaga.
Waxaa la siiyay fursad uu ku bilaabo isboortiga mahadsanid walaalkiis Fabián, taas ayaa ka caawisay inuu tababaro isaga iyo tababarihiisa Luis Muñoz, qaab ku habboon tartanka adkeysiga si aad ugu guuleysato maaddada jimicsiga.
Tababarihiisa gaarka ah ayaa xaqiiqsaday awooda weyn ee uu leeyahay wuxuuna ku dhiiri galiyay inuu sii wado tababarka isagoo uga mahadcelinaya hibada weyn iyo edebta weyn ee uu ku qaatay qeybtaan. Tani waxay ku kaliftay inuu qaado abaalmarintiisii ​​ugu horreysay 1990, oo bilad naxaas ah ku helay Tartankii Ciyaaraha Fudud ee Adduunka ee ka dhacay Plovdiv, Bulgaria.
Jidkaaga shaqo ee ugu horreeya
Sannadkii 1992 wuxuu ku guuleystay cinwaanka adduunka ee dhallinyarada magaalada Seoul, Korea. Tani waa mid ka mid ah isku daygiisii ​​ugu horreeyay ee guuleysta si looga caawiyo inuu sii wado raadinta xirfadiisa ciyaareed. Halkaas ayey ka yimaadeen ku taageer kafaala-qaad ballaaran dhowr sano, wax uusan ka dhex helin dowladiisa.
Biladihiisii ​​ugu horreeyay ee Olimbikada
En 1996 Jefferson wuxuu ku guuleystey billada dahabka Olympic ee qaabkiisa. Ecuador waxay horey ula sharatay sanado ka hor orodyahano kale mana aysan gaari karin dhibcahooda. Waa markii uu Pérez Quezada goolka gaadhay helitaanka wakhti ah 1 saac, 20 daqiiqo iyo 7 ilbidhiqsi wadada 20-kiilomitir ah. Tusaalaha horumarka edbinta tan iyo markii uu awooday inuu gaaro himiladiisa xitaa mid ka mid ah kabihiisa jaban.
Koobabkiisii ​​kale ee waaweynaa ayuu ku celceliyay 2005 sida Horyaalka adduunka ee Helsimki, Finland iyo 2007 ku celi koobkiisii ​​Osaka, Jabbaan. Ku guuleysta billadaha kale, markanna waa qalin, Ciyaarihii Olombikada ee ka dhacay magaalada Beijing, Shiinaha, 2008.
Abaalmarinada kale ee muhiimka ah
U ururi abaalmarino aan tiro lahayn intaad ku guda jirtid xirfadahaaga kuwa ugu fiican ee iibiya. Waxaa la xusaa in ka badan toban jeer sida cayaaraha ugu wanaagsan Ecuador iyo Ibero-American, sida laga soo xigtay FDA, FEA, COE iyo Madbacadda Qaranka ee Ecuador, min 1990 ilaa 2005.
Waxaa ka mid ah abaalmarino kale oo badan Waxaa loo aqoonsan yahay Isboorti Isboorti 1995, aqoonsi sida Geesi qaran waxaa siiyay dowladda Arch. Sixto Durán-Ballén sanadkii 1996, Abaalmarinta "Darajada Koowaad" ee Abaalmarinta Ciyaaraha sanadkii 1996, iyo Ciyaartooyga Dahabka ah ee Sanadka sanadkii 2001 oo ay soo martay Confederation-ka Koonfurta Ameerika.
Raacitaankiisu ma sahlaneyn
Go'aankiisa ku dhaqanka jimicsigaan wuxuu qeyb ka ahaa dhalanteedyo iyo caqabado si wanaagsan loo tixgeliyey. Ma uusan helin nolol fudud, maadaama uu ka soo jeedo qoys is-hoosaysiiya. Ay ahayd isku dar waxbarashadaada iyo isboortiga y ku maaree dakhligaaga iibiyaha khudradda.
Wuxuu dib u dhac weyn ku yimid 2000 markii mid ka mid ah tartamadii ka dhacay Cayaaraha Olombikada ee Sydney uu ka niyad jabay natiijooyinka la helay. Wuxuu helay booska afraad ee qaabkiisa wuxuuna ka dhigay inuu ka fikiro inuu ka tago xirfadiisa ciyaareed dhowr sano. Muddadan wuxuu awooday inuu dib u bilaabo waxbarashadiisii ​​injineer ganacsi oo uu awoodo inuu dhameystiro.
Ciyaaryahan ahaan iyo bini aadam ahaanba dhaawac culus ayaa soo gaadhay taas ayaa ka qaadi lahayd xirfadiisa ciyaareed. Sanadkii 1993 waxaa ku dhacay jabka miskaha Taasi waxay ka dhigtay wax aan macquul aheyn xilli. Mid kale oo ka mid ah khaladaadkiisii ​​wuxuu ahaa 1999 markii waxay heleen qalab herniated ah.
Kagama ay soocmin tartankiisii laakiin wuxuu u bareerayaa khatar si uu ula kulmo cawaaqib xumo aan laga soo kaban karin haddii uusan qaadin tallaabooyin. Xitaa iyada oo tallaabooyinkiisa la sheegay, wuxuu ku guuleystay billadda qalinka mas'uuliyaddiisa iyo xanuunkiisa oo dhan. Kadibna wuxuu galay qaliinkiisa oo wuxuu ku sii hayay kursiga curyaamiinta dhawr toddobaad.
Sidee ka noqoshadaadu ahayd?
Pérez wuxuu ka fariistay howlihiisa isboorti 2008 wuxuuna sii watay waxbarashadiisa. Wuxuu awood u yeeshay inuu Master ka noqdo Daraasaadka Dowlada Latin America ee Jaamacadda Salamanca (Isbaanish), Maamulka Ganacsiga iyo injineer ganacsi ee Jaamacadda Azuay, shahaadada mastarka weyn.
Wuxuu abuuray Jefferson Pérez Foundation in la hirgeliyo dhisme caddaalad ku ah bulshada dhexdeeda, halkaasoo ahmiyadda koowaad la siin karo dhammaan carruurta leh ilaha dhaqaale ee hooseeya. Dastuurkani wuxuu gacan ka gaysan doonaa fulinta barnaamijyada iyo mashaariicda midnimo ee tababarka waxbarashada iyo caafimaadka.
Finalmente u tartamay 2019 isagoo u sharaxan duqa magaalada Cuenca dhaqdhaqaaqa Dib-u-dhalashada, laakiin lama dooran karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Jefferson Perez
Sida loo ogaado inaad jacayl kujirto iyo inkale
Cun caafimaad leh